A mụrụ Robert Louis Stevenson. 3 ahọpụtara ahọpụtara | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Ndị edemede, Akwụkwọ, Novela
Robert Louis Stevenson A mụrụ m n’ụbọchị dị ka taa site na 1850 en Edinburgh. Ọ bụ odee akwukwo, ode akwukwo na ode akwukwo, na ụfọdụ ọrụ aghọwo ndi ochie nke akwukwo obughi nani nwata na ntorobia, kama rue obula. Onye edemede nke eluigwe na ala njem aha dị ka Treasure Island, Black Black, Onyenwe nke Ballantree o Dr. Jeckyll na Maazị Hyde, o biri ndụ n'ezie dika ndụ adventurous. Taa, achọrọ m icheta ya na nke ya akuko egwu amaghi ama na 4 poems ahọrọ ya n'ọrụ ya.
2.1 Otu ụbọchị anyị hụrụ ibe anyị n’anya
2.2 Ahụ m bụ ụlọ mkpọrọ m
2.3 Enweghị ọmịiko anyị na-abanye n'abalị
Nwa engineer, mụọ ọrụ a na Nri mgbe e mesịrị na Edinburgh. Ma ọ dịla mgbe ọ bụla mmasị akwụkwọ ma kpebie ịrara onwe ya nye ya. O mere nke ọma na n'ime afọ ole na ole ọ ghọrọ otu n’ime ndị edemede kacha mkpa n’oge ya.
Ihe ewu ewu ya gbadoro ukwu na nkpuchi nke obi ya na akwukwo akwukwo. Ma, ọ zụlitekwara uri maka ụmụaka (Ogige nke amaokwu maka ụmụaka) na ndị okenye. Ndị a bụ abụ 4 a họọrọ site na abụ abụ ya.
Really na-enwe mmasị ị nwe ike ịgbanye
ma rigoo, gbadata ...?
Ọ bụ otu n'ime ihe na-atọ ụtọ
na nwatakiri nwere ike ime!
Inye onwe m ike m na-achịkwa ogige ahụ
ma ahụrụ m ebe ahụ n’ebe dị anya
osimiri na ugwu, ehi na, n'ikpeazụ,
gịnị dị maka obodo ndị ahụ.
M na-agbada ma emesịa m ga-ahụ
ahịhịa dị n’ala,
Ana m agagharị n'ikuku, ana m agbanye onwe m ọzọ
Na m na-arịgo, m na-agbadata, m na-efe ofufe!
Otu ụbọchị anyị hụrụ ibe anyị n’anya
N'etiti oke ohia nke mkpụrụ osisi mkpụrụ osisi na agwaetiti nke ahịhịa amị, dịka site na ụwa nke bụ naanị mbara igwe, oh ihu ikuku, ụgbọ mmiri nke ịhụnanya anyị fegharịrị. Na-enwu gbaa dị ka ụbọchị ka anya gị na-enwu, na-enwu gbaa ka osimiri toburu ma mbara igwe na-adịru mgbe ebighị ebi na-egbukepụ.
Mgbe ebube nwụrụ na chi jiri ọla-edo, ọnwa na-enye ọfụma gbagoro, anyị juputakwara okooko osisi ụlọ. Na-enwu gbaa bụ anya gị n'abalị ahụ, anyị biri ndụ, eeh hụrụ m n'anya, anyị hụrụ n'anya.
Ugbu a, ice na-ekpuchi osimiri anyị, ya na-acha ọcha snow na-ekpuchi agwaetiti anyị, ma na-esote oyi ọkụ Joan na Darby doze na nrọ. Agbanyeghị, na nrọ, osimiri na-asọ ma ụgbọ mmiri nke ịhụnanya ka na-aga n'ihu.
Gee ntị n'olu ụgbọ mmiri na-ebelata mmiri ya. Na n’oge ehihie n’oge ehihie mgbe nrọ na-arọ nrọ na mgbape nke ekwú ọkụ, na ntị nke ndị hụrụ ochie osimiri nke ịhụnanya ha na-abụ abụ na ahịhịa amị.
Oh hụrụ m n'anya, ka anyị hụ ihe gara aga maka na otu ụbọchị anyị nwere obi ụtọ, na otu ụbọchị anyị hụrụ ibe anyị n'anya.
Ahụ m bụ ụlọ mkpọrọ m
Ahụ m, nke bụ ụlọ mkpọrọ m,
ọ bụkwa ogige ntụrụndụ m na ụlọ elu m:
Ha dị ukwuu nke na m nọ ebe ahụ mgbe niile,
ụbọchị niile, site n’otu akụkụ ruo n’akụkụ nke ọzọ, jiri nwayọ;
na mgbe abalị malitere ịda
n'elu akwa m, na-ero ụra,
mgbe ụlọ ahụ dum na-ada ụda mgbe ọ na-eteta,
dị ka nwa anụ ọhịa,
na mgbede, ọ ga-eduhie ya n'ụzọ ya,
(na-awagharị, otu ụbọchị ọkọchị
n'akụkụ mkpọda ugwu ahụ, rịgoro)
ọ ka na-ehi ụra n’ugwu ya;
Ọ toro ogologo, dị gịrịgịrị, ma zuru oke,
na ebe ahu, na mbara igwe ebighi-ebi,
m pụrụ ichetụ n'echiche na-aga dị ka egbe.
Enweghị ọmịiko anyị na-abanye n'abalị
na-ahapụ oriri oké mkpọtụ, na-ahapụ mgbe ị na-apụ
Na-ama jijiji iji cheta ụmụ mmadụ,
ọkụ, ụtọ, na-emebi emebi dị ka egwu.
Atụmatụ ihu, ụda olu,
aka nke aka a hụrụ n'anya, ihe niile, otu na ibe,
Ha ga-ala n'iyi ma laa n'iyi n'ụwa:
mgbe, n'ime ụlọ nzukọ ahụ, ìgwè mmadụ ahụ nwere obi ụtọ maka onye ntụgharị okwu ọhụrụ ahụ.
Ma mmadụ nwere ike iwe obere oge ịhapụ
na, na-amụmụ ọnụ ọchị, na gị ochie obi cheta
ndi e chefuola ogologo oge.
Na echi, ya onwe ya, ga-ala ezumike n'akụkụ nke ọzọ nke ákwà mgbochi ahụ.
Ya mere, oge, nke ga-abụ ihe ọhụrụ nye ndị ọzọ, na-echefu anyị ma na-aga n'ihu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndị edemede » A mụrụ Robert Louis Stevenson. 4 họọrọ poems